United States inoongorora kubiridzira kwemitengo muBitcoin | Gadget nhau
United States inoongorora zvinobvira kudhura kwemitengo muBitcoin
Iyo cryptocurrency musika, neBitcoin iri pamberi, haina gore rakanakisa. Kukosha kwayo kwakaderera zvakanyanya kubva munaNdira. Muchikamu chikuru nekuda kwemitemo yakawanda uye zvinorambidzwa zvave zvichisvika. Chinhu chakakanganisa musika nenzira inoshamisa. Asi zvinoita sekunge matambudziko haasati apfuura. Sezvo United States Dhipatimendi Rezvemitemo richangobva kutanga ongororo
Tsvagurudzo inoitirwa ratidza kuti mutengo weBitcoin uye mamwe ma cryptocurrensets, akadai seEthereum, akashandiswa, kubva kune mamwe mapoka. Saka vanotsvaga kuratidza kana zviito zvisiri pamutemo zvakaitwa mune dzino zviitiko.
Masosi akati wandei akatoudza vamwe vezvenhau kuti ivo vaiziva nezve kutanga kweiyi ongororo muUnited States. Inotsvaga kuziva kana mutengo weBitcoin wakurudzirwa kana kuyedza kufurira. Pakati pehunyanzvi hwashandiswa tinowana spoofing, iyo inotsvaga kuzadza musika nemirairo yenhema saka vamwe varimi vanofunga kuti vanofanira kutenga kana kutengesa.
Kunyangwe isiri iyo yega, sezvo kumwe kushambidzwa kwekufona kufona kwave kuwanikwa. Mariri, inverse inoshanda pamwe naye, nechinangwa chekupa pfungwa yekuti pane zvinodiwa mumusika. Nekudaro, vamwe vatengesi vanosarudza kushanda futi, mune iyi nyaya neBitcoin.
MuUnited States vane hanya yehunyengeri hunogona kuitika pamwe neBitcoin uye mamwe ese emari yedhijitari. Kunyangwe kufungira kuti musika wakashandiswa hazvisi zvitsva, sezvo ziviso dzerudzi urwu dzave kubuda kubvira gore rapfuura. Zvinotaridza kuti paive nechokwadi mukati mavo.
Kuferefeta uku kunogona ngatifunge iko kwekushuva kwekuda kwekuiswa kwemutemo yemusika we cryptocurrency. Chinhu chinoita senge kune mamwe mapoka anoda kuita, neGemini kubva kumapatya eTwinklevoss pachigaro. MuEurope, njodzi dzinogona kuitika dzeBitcoin dzakakurukurwa nguva pfupi yadarika, kunyangwe hazvo pasati pave nemutemo mune izvi. Zvinhu zvichachinja nekukurumidza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » United States inoongorora zvinobvira kudhura kwemitengo muBitcoin
Chii chinonzi GDPR uye chinotibata sei isu sevatengi?
Spotify achabhadhara 112 miriyoni emadhora kuti ashandise mimhanzi pasina rezinesi